Xog Xasaasi: Kulan Dhexmarey Siyaasiinta Mucaaradka ah iyo Guddiga Doorashooyinka Puntland ee KMG ah.. | AllJubbalandnews
Xog Xasaasi: Kulan Dhexmarey Siyaasiinta Mucaaradka ah iyo Guddiga Doorashooyinka Puntland ee KMG ah..
Guddiga Doorashooyinka KMG ah ee Puntland ayaa shir gaar ah la qaatay xubno kasocday Siyaasiinta mucaaradsan dawladda ee leh hanka siyaasaded, waxayna ka wada hadleen sidii dhabaha loogu xaari lahaa furashada nidaamka Asxaabta badan ee Puntland.
Dood adag ayaa dhexmartay xubno ka socday dawlada Puntland, Guddiga TPEC iyo Siyaasiinta damaca leh,waxayna ka doodeen suuragalnimada in doorashoo xor ah la qabto.
TPEC ayaa sheegtay in ay u diyaarsan tahay sidii bulshada Puntland oo dhan looga dhaadhicin lahaa qorshaha Asxaabta, oo uu yahay mid u furan Shacabka Puntland, ayna waajib tahay in qeyb laga noqdo.
Wasiiro kasocday dawladda Puntland ayaa ku sifeeyey go`aanka dawladda mid dhameystirtay dhamaan sharuudihii looga baahnaa, ayna ugu baaqayso Beesha Caalamka iyo dalalka daneeya arrimaha Dimuquraadiyadda in ay ka caawiyaan guddiga baahiyaha taagan.
Siyaasiin kala duwan oo ay qaarkood musharaxiin ka ahaa doorashadii dhawan dhacday, sidaas oo kalena hadda markale u tarmaya xilkan oo madasha joogay ayaa sheegay in wixii wanaagsan ay qeyb ka yihiin.
Siyaasiinta ayaa saluugay hab dhaqanka dawladda oo ay sheegeen in uu mar kasta yahay mid kaduwan sidda xaqiiqadu tahay, waxayna ku dhaliileen go`aankii ugu dambeeyey soo baxay oo ay sheegeen in uu ahaa mid ka hor imaanaya furashada Nidaamka Asxaabta Siyaasadeed oo mar kasta qabsanaya kulamadooda khaaska ah.
Shirar ayaa la rumeysan yahay in ay gogol xaar u yihiin tartan oo adag oo siyaasadeed, kaas oo bilaaban doona wixii loo gaaro bisha April ee fooda nagu soo haysa xiligaas oo mudada Madaxweyne Gaas ay ka harsan tahay wax ka yar sannad.